3D Designer ကိုမောင်မောင်ဆန်း နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | YoeYar CG Blog
3D Designer ကိုမောင်မောင်ဆန်း နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
“၃ မိနစ်စာ Animation တခုကို အဆင့်မီမီထွက်ချင်ရင် ၃ ပါတ်ကနေ ၂ လလောက်အထိ အထိအချိန်ယူရပါတယ်” (3D Designer ကိုမောင်မောင်ဆန်း) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ကာတွန်း animation တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပြီးတော့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူတွေထဲမှာပါတဲ့ ကိုမောင်မောင်ဆန်းက Yoeyar CG blog (www.yoeyar.com) ဆိုပြီးတော့ Blog တစ်ခု ကို ဖန်တီးထားပါတယ်။ အခု Singapore မှာ သုံးဘက်မြင်ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းတွေကို ဆွဲတဲ့ 3D designer တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုမောင်မောင်ဆန်းက ဒီ Blog ဟာ သူ့ဘဝနဲ့ကို ချီပြီးတော့ အသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့။
KMMS : ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွေထဲမှာ Idea တွေ ဖလှယ်လို့ရတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု၊ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ သိမ်းထားလို့ရတယ်၊ အချင်းချင်း ပြလို့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ personal အရဆိုရင်တော့ ဘဝနဲ့ ချီပြီးတော့ အသုံးဝင်တယ်ပေါ့။
VOA : အဲဒီ့တော့ သူ့ Blog မှာ ဘာတွေများ တင်ထားလို့ပါလဲ။
KMMS : ကျွန်တော်က ကာတွန်းဆွဲတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဝါသနာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကြီးလာတော့ ကျွန်တော်က 3D ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်။ လုပ်ဖြစ်တော့ မြန်မာပြည်မှာ နေတဲ့ တောက်လျှောက်လုံးမှာ 3D နဲ့ပဲ ကျွန်တော်က ရပ်တည်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့… ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကားလေးတွေ၊ ဇာတ်ကောင်လေးတွေ၊ အိုင်ဒီယာလေးတွေ… နောက်ပြီးတော့ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံကြမ်းတွေပေါ့ Sketch တွေ၊ အဲ့တာတွေကို ကျွန်တော်မှတ်တမ်းအဖြစ်နဲ့ ထားချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီ Blog ကိုရေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက သူတို့ post ကောင်းကောင်းလေးရှိရင်လဲ သူတို့ဆီကခွင့်တောင်းပြီးတော့ သူတို့နာမည်နဲ့ပဲ ယူပြီးတင်တယ်။
VOA : သူဖန်တီးထားတဲ့ သုံးဘက်မြင်ပုံတွေ၊ ကလေးတွေအတွက်ပညာပေး ကာတွန်းလေးတွေ၊ အသက်ဝင် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံတွေနဲ့ Blog အကြောင်းကို မမေးခင်မှာ လက်ရှိ သူဘာအလုပ် လုပ်နေတယ်ဆိုတာကို သိထားရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
KMMS : ကျွန်တော် Singapore မှာ 3D interior design fieldမှာ Visualizer အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ Visualizer ဆိုတာ ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ အဆောက်အအုံတွေ မဆောက်ခင် လူတွေက အပြင်မှာ ဆောက်ပြီးရင် ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာ ဓာတ်ပုံထဲကအတိုင်း ကြည့်ချင်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်အောင် ကျွန်တော်က 3D နဲ့ လုပ်ရတာပါ။
VOA : အဲဒီ့ Blog မှာသွားကြည့်ရင် ပုံတစ်ပုံမှာ မျဉ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းက ဘယ်လောက် အရေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အရောင် အယူအဆတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ ဒီအရာင်အယူအဆတွေဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ် ဆိုတာမျိုးကိုလဲ ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ဒီ Computer Graphic Designer တယောက်အတွက်ပေါ့နော် ဒီ ပန်းချီ အခြေခံသဘောတရားတွေ သိထားဖို့ရော ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
KMMS : အင်း… အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ… အဲဒါတွေက.. ဘယ်လိုပြောရမလဲ… အခြေခံကောင်းမှ …..like သစ်ပင်တစ်ခုက အမြစ်ကောင်းမှ သူက အခက်အလက်တွေက ဝေဆာတာကိုး။ အဲဒီ့တော့ အခြေခံကောင်းကောင်း ပိုင်နိုင်ထားမှ သူ့လက်က ထွက်လာတဲ့ အနုပညာပစ္စည်း၊ အနုပညာမဟုတ်ဘဲ Commercial ဆိုလဲ Commercial ပစ္စည်း… ဘာပဲ ထွက်လာ ထွက်လာ ဒီဟာက သူဘယ်လောက်အထိ အုတ်မြစ်ခိုင်ခိုင်ရှိလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လက်ရာကွဲသွားတာပဲလေ။
VOA : ကိုမောင်မောင်ဆန်း လုပ်တဲ့ Animations တွေပေါ့လေ။ အဲဒီ့ဟာတွေထဲမှာ အများစု ကျွန်မ တွေ့တာတော့ ကလေးတွေအတွက် ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေကို အဓိကလုပ်တာတွေ့ပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ဒီကလေးပညာပေးကာတွန်းတွေ လုပ်ဖို့ အားသန်လို့လားရှင့်။
KMMS : အင်း… (ရယ်လျက်) အဲ့လိုပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုက ကာတွန်းလဲ ကြိုက်တယ်။ ငယ်ငယ်တည်းက ကျွန်တော့်အမေက “သားလေး ကြီးလာရင်ဘာလုပ်မလဲ” လို့မေးရင် “ကာတွန်းဆရာလုပ်မယ်” အဲ့လိုမျိုးတောင် ဖြေတာ ဆိုတော့လေ။ ဒါပေမယ့် ကြီးလာတော့ တကယ်လုပ်ဖြစ်တာကတော့ Animator ပေါ့။ Animator ဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်က UNICEF နဲ့ ချိတ်မိပြီးတော့ သူတို့က Animation Series Project လေးတွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီ့ဘက်မှ အားသန်တာနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။
Animation က ရုပ်ပိုင်းလဲပါတယ်၊ အသံပိုင်းလဲပါတယ်၊ တည်းဖြတ်တာတွေလဲပါတယ်၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဇာတ်လမ်း၊ Storyboard အကုန်လုံးပဲ။ အဲဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ မိနစ်စာလောက် Animation တစ်ခုကို Quality အဆင့်မီ ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ၃ ပတ်လောက်ကနေပြီး ၂ လ လောက်အထိ အချိန်ယူရပါတယ်။ တကယ်လို့ VCD/DVD ဇာတ်လမ်း မိနစ် ၃၀၊ ၄၅ မိနစ်စာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အဆင့်မီမီနဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၆ လ၊ ၁ နှစ်လောက်အထိ အချိန်ယူပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်။
VOA : ကိုမောင်မောင်ဆန်း ရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ ဒီ Animation ဆိုတာမှာ အရုပ်က လှုပ်နေရုံမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ၊ အသက်ဝင်နေပြီးတော့ လှုပ်နေတဲ့ပုံဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့တော့ ဒီလို အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ Animation ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့လေ… ဘာတွေကလိုလဲ၊ ဘာတွေက အရေးကြီးတယ်လို့ရော ပြောနိုင်ပါသလဲ။
KMMS : Animation ဆိုတာ လူတွေ ဖန်တီးတဲ့ စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်း၊ အရုပ်ကလေး တစ်ခု၊ အဲဒါလေးတွေ လှုပ်သွားရင်ကို အဲဒါကို Animation လို့ခေါ်လို့ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ Power Point ထဲမှာ စာလေး တစ်ကြောင်း ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ အဲဒါကို Animation ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် စာက ဘယ်ကနေညာကို ပြေးသွားတယ်။ အဲဒါ Animation ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူကကျတော့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ အရုပ်မဟုတ်တော့ဘူး။ လှုပ်နေတဲ့အရုပ် မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ အရုပ်လှုပ် ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့လိုမျိုး မဖြစ်အောင်ကျတော့ ရှေးရှေးကတည်းက Animation ဆရာကြီးတွေပေါ့။ သူတို့ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ Rule တွေပေါ့။ ကာတွန်းဆိုတာကျတော့ သာမန်ထက် နည်းနည်းလေး ပိုပေးရတယ်ပေါ့။ ဥပမာ – လူက အနောက်ကို ၂ လက်မ ယိမ်းတယ်ဆိုရင် ကာတွန်းထဲမှာ ၄ လက်မ လောက် ယိမ်းပေးလိုက်တယ်။ အဲ့တာမျိုးပေါ့.. နည်းနည်းလေး ပိုလိုက်ရမှ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကာတွန်းက အရုပ်ထဲမှာ မြင်ရတာဆိုတော့လေ… အဲ့လိုမျိုး Rule တွေ၊ အခြေခံတွေရှိတာပေါ့။ အဲ့တာကြောင့်မို့လို့ အဲဒီ့ Rule တွေ၊ အခြေခံတွေကို သေချာ နားလည်သိရှိပြီးတော့ Animations လုပ်မှသာလျှင် တကယ်အသက်ဝင်တဲ့ Animation ဖြစ်မယ်။
VOA : ကိုမောင်မောင်ဆန်းရဲ့ ပထမဆုံး 3D Animation ဆိုတဲ့ Post ပေါ့လေ။ အဲဒါကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းကပေါ့နော်… ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဒီလိို Animator ဖြစ်လာဖို့အတွက်က ဘယ်လောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကိုလဲ ကျွန်မတို့ သိရတယ်ပေါ့လေ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်လိုပဲ အခုမှ စပြီးတော့ ဒီလို ဖန်တီးချင်တဲ့လူတွေကိုရော၊ ဘယ်လိုအကြံပေးနိုင်ပါလဲရှင့်။
KMMS : (စဉ်းစားလျက်) ကျွန်တော်ကတော့ အကြံပေးနိုင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ “ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့နဲ့” ပေါ့။ အဓိက က ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့လမ်းပေါ်ကနေ လမ်းဘေးကို ဆင်းမလျှောက်နဲ့။ လမ်းဘေးကို မတော်တဆ ဆင်းလျောက်မိတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အမြန်ဆုံးလမ်းပေါ်ပြန်တက်ပါ။ အဲ့တာဆိုရင် ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ခဏဆိုတဲ့ အချိန်အတောအတွင်းမှာ ရောက်မယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်က အကြံပေးချင်ပါတယ်။
Yoeyar CG Blog ပိုင်ရှင် ကိုမောင်မောင်ဆန်းပါရှင်။ သူ့ရဲ့ Blog လိပ်စာက www.yoeyar.com/blog ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အများအတွက် ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ဗဟုသုတ ဖြစ်စရာ Blog တွေ အကြောင်းကို အစီအစဉ် လုပ်ချင်လို့ အကြံပေးချင်တယ်ဆိုရင်လဲ burmese@voanews.com ဆီကို Blogger လို့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးတော့ Email ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။
Original Link: လှုပ်ရှားသက်ဝင် အရုပ်ထွင်
Myanmar New Year 2011
Playground: The Ambush
2 thoughts on “3D Designer ကိုမောင်မောင်ဆန်း နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း”
Lionslayer on August 3, 2010 at 1:51 am said:
Thanks Lone2 for all the typing work and Ma Su Myat Mon for wonderful questions. :)
John Moe Eain on August 3, 2010 at 8:57 am said:
CONGRATULATION BRO! :D